भारतमा मोदीको पुनरागमनः अर्काे नाकाबन्दीको लागि नेपालको तयारी::Leading News Portal From Nepal.
भारतमा मोदीको पुनरागमनः अर्काे नाकाबन्दीको लागि नेपालको तयारी
टिप्पणी:विश्वलाई चकित पार्दै पाँच वर्षअघि विशाल देश भारतको वागडोर समाल्न सत्ताको भ¥याङ चढेका मोदी फेरि अर्काे पाँच वर्षको लागि शक्तिशाली भएर आए । हिन्दुत्वलाई आफ्नो देश र पार्टीको मुख्य सुगन्ध ठान्ने भारतीय जनता पार्टीका नायक मोदीले फेरि एक पटक दुनियाँलाई छक्कै पारिदिए । अरु ९ सिट भइदिएको भए उनीसँग दुई तिहाइ वहुमत हुन्थ्यो । तथापि मोदीको दोस्रो इनिङ झनै शानदार भयो । भारतमा भएको योचुनाव र त्यसको परिणामले नेपालमा पनि खास अर्थ राख्छ । यसपाली नरेन्द्र मोदीको सत्तामा पुनरागतमन हुने वित्तिकै नेपालको खासगरी राजनीतिक तथा वुद्धीजीवी क्षेत्रमा व्यापक चर्चा परिचर्चा र टिप्पणी शुरु भएको छ । म एकजना शिक्षक भएपनि देश प्रेमको आँखीझ्यालबाट मोदीको सत्ता पुनरागमनको सन्दर्भमा आफ्नो काँचोकचिलो टिप्पणी राखौं कि भनेर तम्सेको छु ।
नेपालको तन, मन र धनमा भारतले सधैं महत्वपूर्ण प्रभाव पार्दछ । त्यस वाहेक नेपालको भारतसँग सदिऔं पूरानो सम्बन्ध छ । धर्म, भाषा, संस्कृति तथा प्राकृतिक अवस्थीतीमा समानता छ । त्यसकारण पनि भारतमा हुने सत्ता परिवर्तनले नेपाललाई मज्जाले छुन्छ ।
अहिले हामीले देखिरहेका छौं कि यसबारे नेपाली मिडियामा प्रशस्त खबरहरु आइरहेका छन् । हाम्रा प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले मोदी विजय भए लगत्तै फोन गरेर वधाई दिएका छन् । सधैँ नेपाल भारत विच असल सम्बन्धको रहीरहोस भन्ने सदिच्छाका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले शुभकामना दिएका छन् । प्रधानमन्त्री मात्र होइन तमाम नेपालीहरु भारतसँग नेपालको सधैं समान, सम्मानीत तथा मित्रवत सम्बन्ध रही रहोस भन्ने चाहन्छन् । यस्तो हुनु पनि पर्छ । तर, के नेपाल सरकार र आम मानिसले चाहे अनुरुपको सम्बन्ध आगामी दिनमा सम्भव होला? भारतको नयाँ सरकारले नेपाललाई कुन रुपमा हेर्ने हो ? नेपाल–भारत विचको सम्बन्धले कसरी उचाई लिने हो ?त्यो त हेर्न वाँकी छ तथापि यसै माथि एक छिन घोत्लौं ।
अब आउने दिनमा नेपाल भारत सम्बन्ध ठिकठाकै होला भन्ने आशा चाँहि गर्न सकिन्छ तर भरपर्नुहुन्न । मेरो वुझाइमा नेपालले भारतसँग मित्रवत सम्बन्ध राख्दै गर्दा पनि अर्काे नाकाबन्दी हुन्छ भनेर पूर्व तयारी गर्न आवश्यक छ । मौका पाउन साथ भारतले नेपालको घाँटी पक्कै न्याक्छ । विगतमा त्यही गरेको हो । यहाँ तयारी भन्नाले नेपालले अब तिव्रगतिमा सबैकुराहरुमा आत्मनिर्भर हुने बाटोमा अघि लाग्नु पर्छ । कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान अर्थतन्त्र भएर पनि भएभरको अन्न चाँहि भारतबाट ल्याउनु परेको छ । नेपालले यो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । स्वदेशीय उद्योगलाई विशेष अवसर र सुविधा दिएर हरक्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ । उत्तरतर्फको सम्बन्धलाई परिणाममूखी बनाउँदै लैजानुपर्छ । अहिले चीनसँगको सम्बन्धमा नेपालले जुन उपलब्धि हाँसिल गरेको छ त्यसलाई अझ विस्तृत पार्दै लैजान आवश्यक छ ।
नेपालले बुझ्नै पर्ने तथ्य चाँहि सारमा भारतले नेपाललाई आफ्नो हात सधैं राख्न चाहान्छ । आफुले चाहे अनुरुप हरक्षेत्रमा गर्न र गराउन चाहन्छ । नेपालबाट सकेसम्मको फाइदा लिन चाहान्छ । हाम्रा तराईका नेपाली दाजुभाई दिदी वहिनीहरुलाई आफु तर्फ आकर्षीत गर्दै नेपाललाई आफ्नो काबुमा राख्ने र मिले तराईलाई सिक्खीमीकरण गर्ने अभिष्ट राख्दछ । तर, तराईका हाम्रा वीर नेपालीहरुलाई यो कुरा पटक्कै मनपरेको छैन । धेरैले भारतको यो रवैया मन पराएका छ्रैनन । त्यसको वाबजुद पनि भारतले कुनै न कुनै वहानामा फुट अनि राजको नीति अख्तियार गरीरहन्छ । त्यसकारण नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध सधैं तरल अवस्था रहन्छ । यसलाई नेपालले गहिरोसँग बुझ्न आवश्यक छ । नयाँदिल्लीमा जो जसको सरकार आए पनि सामन्य व्यवहार वाहेक भारतले नेपाल हेर्ने नजर सारमा बदल्दैन ।
तत्कालको लागि भने नेपाल भारत सम्बन्धमा सामन्य नै रहन्छ । मोदी पुनरागामनले पनि खासै नकरात्मक असर पार्दैन । वरु केही सकारात्मक पहलहरु हुन सक्छ । यो समयलाई नेपालले आफ्नो विकासको लागि भरपुर सदुपयोग गर्नुपर्छ ।
अहिले तत्कालै नेपाल अफठ्यारोमा पार्ने खालको मोदीले कुनै पनि कदम चाल्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसको केही मुख्य कारणहरु छ ।
अब भारतले आफु शक्तिशाली भएपनि विगतमा जस्तो घरभित्र घुसेर नेपालको आन्तरीक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गल्ती गर्ने छैन कि भन्ने थोरै विश्वास गर्न सकिन्छ । विगतको उसको घरभित्र घुस्ने कदमलेव्याक फायरभएको कुरा उसले राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ । अब आउँदो दिनमा भारत अझैं शक्तिशाली हुँदै जाने छ । तर, पनि नेपालसँगको उसको सम्बन्ध अब क्रमिक रुपमा सकारात्मक सुधार आउने अपेक्ष गर्न सकिन्छ । पूराना सम्बन्धहरुलाई केलाएर त्यसको सुधार गरी पक्कै पनि भारतले नेपालसँग मित्रवत सम्बन्ध राख्न बाध्य हुनेछ । त्यसको नेतृत्व मोदीले गर्नेछन् । अबको पाँच वर्ष मोदीले नेपाल भारत सम्बन्धको विस्तारमा प्रयोग गर्नेछन् भन्ने अनुमान लगाउन सकिने परिस्थीति बनेको छ ।
आउने दिनमा मोदीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाएर अगाडि लैजानै पर्छ । उनको भित्री इच्छा त त्यस्तो नहुन पनि सक्छ । तर, केही यस्ता परिस्थीहरु छन जसको कारण भारत बाध्य भएर नेपालको सार्वभौमीकतालई सम्मान गर्दै नेपालसँग मित्रवत सम्बन्ध राख्ने छन् । त्यसबाट मोदी पछि हटे भने भारतलाई केवल घाटा मात्र हुनेछ । मुख्यरुपमा तीन मुख्य कारण छन जसको कारण अब आउने दिनमा मोदीले नेपालसँग अघिल्लो पटकको भन्दा न्यानो सम्बन्ध निर्माणमा ध्यान दिने छन् । त्यसबारेमा केही टिप्पणी गरौं ।
पहिलो कुरो त मोदीले अहिलेको सरकारको तागतलाई बुझेका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सबै सरकारमा यतिखेर प्रचण्ड बहुमतका साथ नेकपाको सत्ता छ । नेपालमा स्थीर सरकार छ । राजनीतिक स्थायित्व छ । देश विकास तिव्ररुपमा अघि बढीरहेको छ । खासगरी उर्जा संकटले थलिएको नेपालमा उर्जा व्यवस्थापन हुनसाथ नेपालले प्रगतिको लय समातेको छ । त्यसकारण मोदीले यो तथ्यलाई राम्ररी बुझेका छन् । विगतमा जस्तो अहिले नेपालमा राजनीतिक पत्तीहरु यताउता खेलाउन सक्ने अवस्था छैन । यसले नेपालसँग भारतले चलखेल होइन सिधा मित्रवत सम्बन्ध देखाउनै पर्छ ।
त्यस्तै नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी लगाएर आफुले गल्ती गरेको वोध प्रधानमन्त्री मोदीलाई पक्कै छ । खासगरी नाकाबन्दी पछि नेपालमा भारत विरोधी भावनाहरु जबरजस्त रुपमा प्रस्फुटन भएकोलेमोदीलाई धक्का लागेको छ । मोदी पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा नेपाली जनताले भव्य स्वगत गरेका थिए । नाकाबन्दी पछि उनी पुन नेपाल आउँदा उही जनताले उनलाई पिँठ फर्काए । मोदीले यसलाई गम्भिर रुपमा बुझेका छन् । त्यसैको परिणाम स्वरुप विभिन्न वहानामा मोदीले नेपालको भ्रमण गरिरहे । नेपाल र नेपालीको गुणगान गाएर अभिव्यक्तिहरु दिइरहेका छन् ।
त्यस्तै नेपालमा कम्युनिष्ट सरकार छ । उत्तर तर्फ क्रमश नेपाल सरकार ढल्कदै गइरहेको छ भन्ने पनि भारतको बुझाइ छ । वेल्ट एण्ड रोड योजना मार्फत दक्षिण एसियामा आफ्नो भूमिका शसक्त पार्न खोजीरहेको चीनलाई नेपालको उपस्थिति अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । त्यसमा नेपालले पनि जोडदार साथ दिइ रहेको छ । नेपालको भूमिकाबाट खुशी भएर चीनले नेपालको राष्ट्रपतिलाई उच्च सम्मान गर्दै वेइजिङमा रातो कार्पेट ओछ्यायो । यसबाट भारत निक्कै अत्तालिएको छ । चीनसँग नेपालको दोस्ती भारतलाई मन परेको छैन । उत्तर तर्फको बाटो खुलाउने र भारतसँग परनिर्भता सदाको लागि अन्त्य गर्ने नेपालको योजना भारतले राम्ररी बुझेको छ । त्यसलाई विफल पार्न भारतले दक्षिण तर्फ पनि विकासको पासा फ्याँकेर नेपाललाई तान्न खोजीरहेको छ । त्यसको जोडदार प्रयास गर्नेछ । अतः अबको दिनमा भारत मित्रवत रुपमा हात फैल्याउँदै नेपाल सामु आउनै पर्ने बाध्यता छ ।
तर, यति हुँदा हुँदै पनि नेपालले भारतसँग सजगता अपनाउनु पर्छ । वर्षौदेखि नेपाललाई पेलेरै अघि बढेको भारतमा भरसक पेल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच गएको छैन । तर, त्यस्तो सोच नेपालका नेताहरुकै कारणले भारतको मनमा उब्जिएको हो । अहिले पनि भारतका कैले सिमा प्रहरी, कैले सैनिकहरु हतियार सहित नेपाल प्रवेश गर्ने । नेपालीहरुलाई हातपात गर्ने, धम्काउने जस्ता अशोभनीय हर्कतहरु गरिरहेको समचारहरु आइरहेका छन् । त्यस्तै सिमाना मिच्ने । नेपाललाई असर गर्ने गरी जताभावी सडक बनाउने, बाँध बनाउने जस्ता कामहरु पनि सिमानामा निरन्तर भइरहेका छन् । मौका पाउन साथ भारतले नेपाल माथि आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोज्छ । त्यसकारण आउँदो दिनहरुमा भारतबाट नेपालले सकारात्मक सम्बन्ध र साथ पाए पनि नेपालले आफ्नो तयारी र सजकता भने सधैव बनाउन आवश्यक छ । जब जब भारतमा सत्ता परिवर्तन हुन्छ त्यतिवेला नेपालले अर्काे नाकाबन्धीको सामना गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो तयारी गर्नुपर्छ । अनि मात्र नेपाल साँच्चै सफल राष्ट्र हुन्छ ।